१ यूहन्ना ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ यूहन्ना ३:१-२४
३ हेर, परमेश्वरका सन्तान कहलाइने सुअवसर दिएर बुबाले हामीलाई कत्ति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ; हुन पनि हामी उहाँका सन्तान नै हौं। त्यसैले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनकि त्यसले उहाँलाई चिनेको छैन। २ हे प्रियहरू हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौं तर पछि हामी के हुने हौं, त्यो अहिलेसम्म प्रकट गरिएको छैन। हामीलाई थाह छ, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ, तब हामी उहाँजस्तै हुनेछौं, किनकि हामीले उहाँलाई साँच्चै देख्नेछौं। ३ जसले उहाँमाथि यो आशा राख्छ, उसले आफूलाई पनि त्यस्तै शुद्ध बनाउँछ, जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ। ४ जसले पाप गरिरहन्छ, उसले कुकर्म पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले पाप कुकर्म हो। ५ तिमीहरूलाई यो पनि थाह छ, हाम्रा पापहरू मेटाउन येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको थियो र उहाँमा कुनै पाप छैन। ६ उहाँसित एकतामा रहिरहनेले पाप गरिरहँदैन; जसले पाप गरिरहन्छ, उसले न उहाँलाई देखेको छ न त उहाँलाई चिनेको नै छ। ७ हे साना केटाकेटीहरू हो, कसैले तिमीहरूलाई बहकाउन नपाओस्; जसले परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गरिरहन्छ, येशू ख्रीष्टजस्तै ऊ पनि परमेश्वरको नजरमा असल हुन्छ। ८ जसले पाप गरिरहन्छ, ऊ दियाबलको* हो, किनकि दियाबलले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलका कामहरू नष्ट गर्ने उद्देश्यले नै परमेश्वरको छोरा प्रकट हुनुभएको थियो। ९ हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मिएको हुन्छ, उसले पाप गरिरहँदैन, किनकि यस्तो मानिसमा उहाँको पवित्र शक्ति* रहन्छ र उसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनकि ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हो। १० परमेश्वरका सन्तान र दियाबलका सन्तान यसैबाट प्रस्ट हुन्छ: हरेक जसले परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गरिरहँदैन, ऊ परमेश्वरको होइन अनि जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन, ऊ पनि परमेश्वरको होइन। ११ किनकि तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेको सन्देश यही हो, कि हामीसित एक-अर्काको निम्ति प्रेम हुनुपर्छ। १२ हामी कयिनजस्तो हुनु हुँदैन, जो त्यस दुष्टको* थियो र आफ्नो भाइको हत्या गऱ्यो। कयिनले किन तिनको हत्या गऱ्यो? किनकि उसका कामहरू दुष्ट थिए तर उसको भाइका कामहरू भने परमेश्वरको नजरमा असल थिए। १३ हे भाइहरू हो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गरेको देखेर चकित नहोओ। १४ हामीलाई थाह छ, हामीले मृत्युलाई पार गरेर जीवन पाएका छौं, किनकि हामी भाइहरूलाई प्रेम गर्छौं। जसले प्रेम गर्दैन, ऊ मृत्युमै रहिरहन्छ। १५ हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, ऊ हत्यारा हो अनि कोही पनि हत्याराले अनन्त जीवन पाउँदैन भनेर तिमीहरूलाई थाहै छ। १६ प्रेम के हो भनेर हामीले यसैबाट जानेका छौं, कि येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति आफ्नो ज्यान* अर्पण गर्नुभयो; त्यसैले हाम्रा भाइहरूका निम्ति आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो। १७ कसैसित जीवन धान्न पुग्ने सरसम्पत्ति छ तर आफ्नो भाइलाई खाँचो परेको देखेर पनि कोमल करुणा देखाउन इन्कार गर्छ भने परमेश्वरको प्रेम उसमा कसरी रहन्छ र? १८ हे साना केटाकेटीहरू हो, हामी वचन र मुखले होइन तर कामद्वारा साँचो प्रेम गरौं। १९ यसरी हामी सत्यका हौं भनेर हामीले थाह पाउनेछौं अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर पनि मनैदेखि ढुक्क हुन सक्नेछौं। २० हाम्रो मनले हामीलाई कुनै कुरामा दोषी ठहरायो भने पनि हामी यो कुरा नबिर्सौं, कि परमेश्वर हाम्रो मनभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ र उहाँलाई सबै कुरा थाह छ। २१ हे प्रियहरू हो, यदि हाम्रो मनले हामीलाई दोषी ठहराउँदैन भने हामी निर्धक्क भई साहसका साथ परमेश्वरसित बोल्न सक्छौं। २२ अनि हामीले जेसुकै मागे तापनि उहाँबाट पाउनेछौं, किनकि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरिरहेका छौं र उहाँको नजरमा असल कामहरू गरिरहेका छौं। २३ वास्तवमा, उहाँको आज्ञा यही हो, कि हामीले उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएबमोजिम आपसमा प्रेम गरिरहनुपर्छ। २४ साथै, जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छ, ऊ उहाँसित एकतामा रहन्छ र उहाँ ऊसित एकतामा रहनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र शक्ति हामीसित भएकोले उहाँ हामीसित एकतामा रहिरहनुभएको छ भनेर हामी थाह पाउँछौं।
^ १यू ३:८ * ग्रीकमा “दियाबोलोस,” जसको अर्थ हो “निन्दक।”
^ १यू ३:९ * शाब्दिक, “बीउ।”
^ १यू ३:१२ * वा, “सैतानको।”
^ १यू ३:१६ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।